Ny kodiaran-drovon'i Shina vita amin'ny kodiarana diamondra ho an'ny karbônina TCT dia nahita endrika fangaro ho an'ny orinasa vollmer sy mpanamboatra | Jinyunxiang
Rifotra vita amin'ny kodiarana vita amin'ny vy vita amin'ny vy sy solika
Fanodinana ivelany kodiarana diamondra
Ny kodiarana vita amin'ny diamondra ho an'ny karbera TCT dia nahita ny fofona tarehy ho an'ny vollmer
endrika: 1ZD1 (mD3)
Dimensions: 125x32x15 (1.5) x1
Fampiasana: fanamboarana famerenam-bokatra vita amin'ny karbônina vita amin'ny tsipika farany.
Ampiasaina indrindra amin'ny fikosoham-bava amin'ny milina CNC ho an'ny kofehy fahitana TCT, kodiarana vita amin'ny diamondra ho an'ny karibory maranitra, ny kodiarana diamondra
ho an'ny fangarony fitaovana karbônina, toy ny Vollmer, Abm, Rekord..Grit miovaova arakaraka ny fampiharana.
Tsy maninona fa misy arofera vaovao (Saw Blade For Plate Processing ， Saw Blade For Solid Wood ， Saw Blade For Aluminium ，
Saw Blade Ho an'ny asa manokana) na ny famerenam-bokatra, ny vokatra avy aminay dia voaray tsara.
Misy lafiny telo tokony haorina ho an'ny nify boribory, endrika, ambony sy sisiny, ary ny faritra samihafa dia mila kodiarana samihafa mba hikosoka amin'ny milina samihafa.
1, Kodiarana amin'ny fikosoham-bava:
Endrika: 4A2, 12V2, 12V9
Asa miasa: nify vorona
Ampahany amin'ny fikosehana: tarehin'ny nify
Misafidiana kodiarana mifangaro hafa arakaraka ny filanao samy hafa. Ny kodiarana vita amin'ny diamondra vita amin'ny alumina dia manana fahatsorana tsara,
mety amin'ny milina famenonam-bokatra vita amin'ny aluminiana sy ny savoka vita amin'ny tsipika ambony Ny kodiarana vita amin'ny bakelite dia marefo, tsy mora manimba ny kodia mifototra ary manana fiainana lava.
Fananana leson-jiro maro isan-karazany
Ny sary sasany dia avy amin'ny Internet. Raha resaka fandikan-dalàna dia mifandraisa aminay handefasa mailaka sy hamafa
Previous: kodiarana fametahana diamondra & cbn ho an'ny Carbide Rod Cutting
Manaraka: kodiarana fametahana diamondra ho an'ny karbônina maranitra isan-karazany nahita ny bàla ambony indrindra 12a2 125X32X5 (2,5 / 2,5) X6
kodiarana vita amin'ny diamondra ho an'ny firafitra isan-karazany ...
Ny kodiarana fametahana diametan'ny resin dia ampiasaina betsaka amin'ny fikosoham-bary mifono tadro vita amin'ny tungsten carbide. Manjary ny volo fikosoham-bary, ary maranitra ary manana fiainana serivisy ela. Ny kodiarana vita amin'ny diamondra vita amin'ny vatan-doko dia ampiasaina amin'ny fanodinana efijery fampisehoana fa tsy fametahana tsy misy fomban-drazana maimaim-poana. Azonao atao ny manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana ny efijery fampisehoana sy ny kalitao tsara tarehy, ary mampihena ny vidiny.Ireo dia manana taham-pahaizana fanesorana avo lenta ary fahamaotinana amin'ny tsara. Kodiarana familiana diamondra no ...
kodiarana vita amin'ny diamondra sy CBN ANY SHARPEN ...
Ny fampiharana ny kodiarana resin-kodiarana vita amin'ny kodiarana resin-kodiarana Resin diametsy kodiarana dia ampiasaina amin'ny fitaovana karbetra tungsten, vera automatique, PDC, PCD, PCBN, seramika, safira, fitaratra optika ary fitaovana magnetika. Ny kodiarana famandrihana diamondra ao amin'ny resin dia misy hery manosika kely, tsy dia be ny fikosoham-bary, tsara ny fanamafisana ny tenany, ny fahombiazana ary ny faran'ny ambony. Ampiasaina indrindra amin'ny fikapohana, famaranana ny fametahana, ny fikosoham-bary antsasaky ny fikosoham-bary ary ny fofona. Ampiasaina betsaka amin'ny famaritana sarobidy ...
Kodiarana vita amin'ny diamondra vita amin'ny kodiarana Saw ...
Ny kodiarana famokarana diamondra dia kodiarana fanosorana diamondra vita amin'ny fomba elektrokimia. Ny takelaka miasa amin'ny kodiarana mifototra dia misy singa abrasive diamondra, ary ny abrasive diamondra dia mifatotra amin'ny substrate amin'ny alalàn'ny vy mifamatotra. Voalohany, ny hatevin'ny mpandrindra metaly vy dia 20% ny haavon'ny grains abrasive grains (fasika ambony), ary avy eo ny agent bonding bonding dia ampiasaina mamatotra (manamafy) ny voam-boasary azon'ny abrasive amin'ny halavany 2/3 ...
Carbide boribory vaingam-bary mba hametahana ny vy, Fanadiovana kodiarana diamondra / Cbn fanadiovana kodiarana ho an'ny fitaovana fanangonam-bolo, Fomba fikosoham-bary diamondra ho an'ny tungeta karbàla, 5inch famatorana kofehy famatorana kodiarana ho an'ny famonosana fitaovana famonosana baoritra, Maitso kodiarana ho an'ny famonosanana, Familiana kodiarana ho an'ny fitaovana famonosana,